देउवाले गरे कञ्चनपुर हत्या प्रकरणमा सरकारको यति ठुलो गल्तिको पर्दाफास, के छ तेस्तो ?
कञ्चनपुरको पुरै सुरक्षा युनिट फेरिएर नयाँ प्रहरी प्रमुख एसपी कुबेर कडाँयत र प्रहरीका वरिष्ट अधिकृतहरुको संलग्नतामा दुर्इ वटा उच्च स्तरीय छानविन समितिले समेत कञ्चनपुर हत्या प्रकरणको अनुसन्धान नयाँ शिराबाट सुरु गरेपनि अपराधीविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेका छैनन्।
जसले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तका बाबुआमा न्याय नपाइने हो की भनेर चिन्तित बनेपछि उनीहरु न्यायको लागि काठमाडौँ नै आएका छन्। उनीहरु काठमाडौं आएर न्या नपाएर नफर्किने सरकारलार्इ चेतवानी दिएको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनेपछि सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
उनले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्याकाण्डका अपराधीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेकोले बालिका निर्मला पन्तका बाबुआमा न्यायका लागि काठमाडौँ नै आएको दावी गरे।
नेपाली काँग्रेस मोरङ काठमाडौं सम्पर्क समितिले मञ्चले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले सरकारमा मानवीय संवेदनशीलतासमेत नभएको टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले भने, ‘सरकारले निर्मला हत्याकाण्डलाई विशेष रुपमा नलिएर समान्य विषयका रुपमा लिएकोले अहिलेसम्म त्यस विषयमा छान्बिन गर्न सकेको छैन् । यसमा सरकारको निकै ठूलो कमजोरी छ ।’
देउवाले भने ‘सरकारले चाहेको भए हत्यारा तत्काल पत्ता लगाउन सक्थ्यो तर सरकारले अपराधीलाई संरक्षण दिएर घटनाको छानबिनमा आनाकानी गरिरहेको छ ।’
कार्यक्रममा उपस्थित अन्य नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा कुरा उठाएका थिए । कार्यक्रममा निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यस पश्चात भएको हत्याको अपराधी तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
Posted on September 15, 2018 Author Categories फिचर न्युज, मुख्य समाचार, राजनीति
Previous Previous post: राजपापछि जनजाति महासंघले असाेज ३ गतेलार्इ टार्गेट गरी गर्‍याे सनसनीपूर्ण निर्णय के हो त्यो ?
Next Next post: प्रधानमन्त्री ओलीको अतिगोप्य डायरी लिक हुँदा भेटियो हटाउन तयारी मन्त्रीहरुको नाम को को परे ?